कति निर्दयी आमा : जसले ७ महिनाकी छोरी हत्या गरिन - Muldhar Post
कति निर्दयी आमा : जसले ७ महिनाकी छोरी हत्या गरिन
मूलधारपोष्ट २०७६, १४ जेष्ठ मंगलवार 335 पटक हेरिएको
सल्यान- सातमहिने छोरी हत्या गरेको आरोपमा आमालाई पक्राउ गरेको छ। जिल्लाको छत्रेश्वरी गाउँपालिका-८, रानागाउँकी २८ वर्षीया सपना भण्डारीलाई छोरी मारेको आरोपमा प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। छोरीलाई कुटपिट गरी हत्या गरेको परिवारको किटानी जोहेरीपछि आमा भण्डारीलाई पक्राउ गरिएको इलाका प्रहरी कार्यालय लुहामले जानकारी दिएको छ। मृतक बालिकालाई पोष्टमार्टमका लागि सल्यान अस्पतालमा ल्याइएको र आमालाई थप अनुसन्धानका लागि इलाका प्रहरी कार्यालयमा राखिएको प्रहरीले बताएको छ।
सृष्टीकर्ताको उपमा पाएकी आमा, लाग्छ मेरो लागी उनीजति प्रिय अरु कोहि छैन् । आमाको सम्मानका खातिर दर्जनौ उपमाहरु दिदै पनि आईएको छ । दुई अक्षरले निर्मित आमा शब्दलाई न हामीले हेलामा पार्न सकिन्छ न बिर्सन नै । जति तिरस्कार गर्न खोजेपनि मन भित्र कहिँ न कहिँ रहन्छिन् । तर आमाको मर्म बुझ्न त्यति सजिलो भने पक्कै छैन् । जो कोहि मानवलाई पनि ९÷९ महिना सम्म कोखमा राखेर जन्म दिन्छिन् । गर्भावस्थाको अप्ठ्यारो समयमा पनि निकै धर्यवान् र सहनशील भएर आफ्नो सन्तानलाई यो धर्तीमा टेकाउछिन् ।
जति पुरुषलाई बाबु बन्न सजिलो छ त्यो भन्दा धेरै गुणामा आमा बन्न गाह्रो छ । सन्तानको जन्म दिनु मात्र आमाको जिम्मेवारी होईन् । जन्मपछि पनि स्तनपान, स्याहारसुसार, पालनपोषण लगायतका कार्यमा मुख्य भूमिका निभाउनु पो आमा । जन्माएर खाल्डोमा पुरेर हिड्नु, खोलामा पाल्नु, पाईखानामा हाल्नु, घाँटी थिचेर मार्नु, गर्भपतन गर्नु लगायतका घृणीत काम सच्चा आमावाट कदापी हुन सक्दैन् ।
जीवनमरणको दोसाँधवाट उम्केर आफ्ना सारा ईच्छा, चाहना र भावनालाई कुल्चिएर सन्तानको सदासदा भलो चाहने तिम्रो आमा । प्रसवको वेदनामा आफ्नो भन्दा पेटवाट बाहिरी संसारमा आउन चाहने तिमिलाई ख्याल गर्ने तिम्री आमा । सुत्केरी अवस्थामा जुवानोको झोल नपाएपनि दुध आएपनि मातृस्पर्शमा टाँसेर तिम्लाई भुलाउन भएपनि दुधको लाम्टो चुसाउने तिम्री आमा । आफुले फाटेको, टालेको वा पुराना लुगा लगाएपनि सन्तानले राम्रै लगाओस भन्ने पवित्र भाव व्यक्त गर्ने तिम्री आमा । त्यस कारण तिम्ले बिर्सेर पनि आमालाई भुल्न, अपमान गर्न मिल्दैन् । चिसोमा न्यानो बनाउन, गर्मीमा शितल बनाउन, सन्तानले दुख्यो भन्दा पनि चिन्ता मान्ने कोमल हृदय भएकी आमा अझैपनि केहिको मनमा बस्न नसकेकीमा चिन्ता लागेको छ । कतिपयको आँखामा टिलपिल टिलपिल आँशु देखेको छु । कतिपय सन्तानले आमालाई बाचुन्जेलसम्म रुवाईराखेको उदाहरण पनि समाजमा उदाहरणको रुपमा देख्न सकिन्छ ।
आमाले नै तिमिलाई आ, आ र क, ख लगायतका बाह्रखरि लेख्न,बोल्न सिकाईन्, तातेताते गर्दै हिड्न सिकाईन् । खान, पिउन, पिसाव फेर्न, दिशा बस्न सिकाईन् । उनैले पारिवारिक तथा सामाजिक असल संस्कार सिकाईन् ।
त्यसै भनिएको होला, आमा शिक्षाको पहिलो गुरु भनेर । तिम्ले पैसाले धेरैथोक किन्न पाईएला तर आमा किन्न पाईएला र ? सहनशीलताको प्रतिमुर्ती आमा बाहेक अरु के हुन सक्छ र ? आमा मायाको खानी मात्र होईनन्, शिक्षाको पहिलो र संसार देखाउने गुरु हुन् । आमा संसारकी श्रेष्ठ र सृष्टीकर्ता मात्र कहाँ हुन् र ? उनी त आर्दशको प्रतिमुर्ती पनि हुन् । सर्वगुणी आमा कर्तव्यकी मुहान मात्र होईनन्, कल्याणकी देवी पनि हुन् । भनिन्छ, आमाको आँशु जीवनकै ठूलो पाप ठानिन्छ । यति भनिसकेपछि आमा को हुन् चिन्न गाह्रो छ र ? तर अचेल आमा आफ्नै श्रीमान् र सन्तानवाट हेलामा पर्न थालीएको छ । तिमिलाई जन्मायो, हुर्कायो, जिम्मेवार बनायो तर बुढेशकालमा आमा बेसाहारा बन्दै बलिन्द्रधारा आँशु झार्न बाध्य बनेकी छिन् । आमाहरुकै लागी भनेर विभिन्न गाउँशहरमा बृद्धाश्रमको योजना तथा भवन निर्माण हुदैछ । बुढेशकालमा साहारा चाहिनेबेलामा आमालाई उहि एक्लोपनको उपहार दिने संस्कार मौलाउदैछ । यस तर्फपनि आमाका सन्तानहरुले गम्भिर रुपमा सोच्नुपर्ने समय आएको छ ।